I-GBP / i-USD iqala kwakhona, ilwa nokuchasana kwi-1.3800
VULA IIMPAWU ZE-FOREX ZONKE
£ 35ngenyanga 1 Ithunyelwe ngenyanga
£ 65iinyanga 3 Ithunyelwe Quarterly
£ 95iinyanga 6 Ithunyelwe Qho ngonyaka
£ 250 Iakhawunti ye-Pro Ubomi bonke Ukufikelela
Fumana imiqondiso yeVIP Forex yasimahla kuNyaka omnye, Vula uvule iAkhawunti kunye noEtoro kwaye wenze idiphozithi, i-imeyile [imeyile ikhuselwe] kunye skrini yemali kwiakhawunti ukufikelela!
Ukuhlaziywa: 18 October 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: 1.4200, 1.4400, 1.4600
Amanqanaba enkxaso aphambili: 1.3400, 1.3200, 1.3000
I-GBP / i-USD yeXabiso kwiXesha elide leNqanaba: Bullish
Ukusukela nge-30 kaSeptemba, IGBP / USD bekukuhambo oluphezulu. Iinkunzi zeenkomo ziye zaphuka ngaphezulu komndilili wokuhamba kodwa zajongana nokwaliwa kwinqanaba le-1.3800 yokuxhathisa. Iponti iphinda ibuyele kwinkxaso engentla kweentsuku ezingama-50 ze-SMA. Ukuhlaziywa kwakhona kuya kuqhubeka kwakhona ukuba inkxaso ye-SMA yeentsuku ezingama-50 ibambe. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-5 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini siya kuvuka kodwa sibuye umva kwinqanaba 1.272 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le-1.3723.
I-GBP / i-USD-Itshathi yemihla ngemihla
Iibini zikwinqanaba lama-55 lamaxesha aMandla aHlanganisiweyo a-14. Kubonisa ukuba imakethi ikwindawo ephezulu kunye nangaphezulu kwe-50. Isibini semali siyakwazi ukunyukela phezulu.
I-GBP / i-USD yeXesha eliPhakathi lokuHamba: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, esi sibini sihamba sinyuka. Isikiti siphuke ngaphezulu kwemilinganiselo ehambayo. Ukuqhubela phambili kunokwenzeka. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-14 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isibini sinokunyuka siye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-1.3835.
Isibini singaphantsi kwe-30% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imakethi ikwi-bearish umfutho. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihlehla phezulu zibonisa uptrend. Iphawundi ine-crossover ekhulayo. Yiminqweno yeentsuku ezingama-21 zeSMA ngaphezulu kweentsuku ezingama-50 zeSMA.
Umbono ngokubanzi we-GBP / USD
Ixabiso le-GBP / USD liphule ngaphezulu komndilili oshukumayo njengoko i-altcoin iqala kwakhona ukunyuka okuphezulu. Iponti iya kuphakama ukuba ixabiso lihlala ngaphezulu komndilili wokuhamba. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukuqhubela phambili ukuya kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le-1.3835.
I-GBP / USD-4 Itshathi yeYure
Yabelana nabanye abarhwebi!